ULondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo ze-SEC-Funda ukuRhweba
US Securities and Exchange Commission (SEC) uSihlalo, uGary Gensler, kutshanje uthe abasemagunyeni bezemali kufuneka balawule ngokuthe ngqo iindlela zokurhweba nge-cryptocurrency. U-Gensler uphinde wabonisa ukuba ezinye izicwangciso zokulawula ziza kufakwa kulo nyaka, ukunyusa ithemba ngokukhuselwa komtyali-mali kwindawo ye-crypto.
Ngaphambi koku, umphathi we-SEC ubethelele imfuneko yemithetho yotyalo-mali engcono kwindawo ye-crypto. Ngo-2021, wabonisa uthando lwakhe kwishishini, eqwalasela imvelaphi yakhe ye-cryptocurrency, kodwa wathi olu thando aluyi kumthintela ekubizeni imimiselo engcono kwimarike. UGensler wathi ngelo xesha:
“Andithathi cala malunga nokukhuselwa kwabatyali-zimali. Ukuba umntu ufuna ukuthelekelela, lukhetho lwakhe, kodwa sinendima njengesizwe ukukhusela abo batyali-mali kubuqhophololo.”
Kwinkomfa yamva nje ye-virtual press, uGensler uphinde waqinisekisa ukuma kwakhe, ephawula ukuba ukutshintshiselana kwe-cryptocurrency kufuneka kujongwe ngakumbi kwi-SEC kunye namanye amagunya okulawula imali ngo-2022. Usihlalo we-SEC wongeze wathi:
“Ndicele abasebenzi ukuba bajonge ngandlela zonke ukufumana la maqonga ngaphakathi kwintlawulo yokhuseleko lomtyali-mali. Ukuba amaqonga orhwebo awangeni kwindawo elawulwayo, iya kuba ngomnye unyaka wokuba uluntu lube sesichengeni. ”
Ngokucacileyo, iKhomishoni iqeshe umcebisi omtsha ophezulu ekupheleni kwe-2021, oyena njongo iphambili kukucebisa uSihlalo uGensler kwimiba yokulawula i-crypto. Umcebisi omtsha, uCorey Frayer, ebesebenza ngaphambili "imiba esusela kubathengi kunye nokhuseleko lomtyali-mali."
IKhomishini yezoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwase-US akukho ziCwangciso zokuValela i-Crypto
Ngo-2021, ishishini le-asethi yedijithali lirekhode ukuvalwa ngokupheleleyo kumazwe aliqela, ukuqala eTshayina. Emva kokuvalwa umlomo kwamaTshayina, ezinye izizwe ezininzi zalandela ngendlela efanayo, nabanye abaninzi becinga ukwamkela esi simo.
Nangona kunjalo, uGary Gensler waqinisekisa uloyiko lwesenzo esifanayo e-US ngo-Okthobha ophelileyo emva kokuqinisekisa ukuba i-arhente yakhe okanye urhulumente wase-US akanazo izicwangciso zokuvala i-cryptos. Usihlalo we-SEC waphawula ukuba i-arhente kuphela emva kokukhuselwa okuphuculweyo kubatyalo-mali kwishishini.
Iindleko zezabelo BTC ETF zatshintshile zibe ngu-XNUMX% ngeveki
I-SEC yase-US ibangele ukuba abantu basabele gwenxa Bitcoin kunye noluntu lwe-cryptocurrency izolo, kulandela i-tweet ngesiphatho sayo esisemthethweni malunga notyalo mali kwiingxowa ezibambe izivumelwano zexesha elizayo zeBitcoin. Iakhawunti (@SEC_Investor_Ed) i-tweeted yathi: "Phambi kokuba utyale imali kwingxowa-mali ephethe iikhontrakthi zexesha elizayo, qiniseka ukuba ubulinganisa ngononophelo ubungozi kunye nezibonelelo ezinokubakho."
I-tweet ikhankanye ibhulethini yomtyali epapashwe ngoJuni yiOfisi ye-SEC yezeMfundo yezeMali kunye neAdvocacy kunye neKhomishini yoRhwebo lweKamva yezoRhwebo (i-CFTC) yeOfisi yeMfundo yaBathengi kunye nokuFikelela. I-bulletin yacenga ukuba: "Abatyali mali bathathela ingqalelo ingxowa mali ngokubhengeza kwimarike yexesha elizayo yokujonga ngononophelo ubungozi kunye nezibonelelo zotyalo mali."
Itwitter yakutshanje yeKhomishini iphakamise ithemba kubabukeli ukuba umlindi angalivuma ikamva le-Bitcoin kungekudala. Iingxelo zibonisa ukuba i-SEC kufuneka ivume ii-ETFs ezininzi ze-Bitcoin kule nyanga.
Ukuthetha malunga nokuvunywa kwe-ETF, umhlalutyi omkhulu we-ETF eBloomberg Eric Balchunas uqaphele ukuba:
"Ukusondela: I-SEC ithumele nje i-Edu bulletin ukuba ibhale ngoJuni kwakhona kunye 'nemali ebambe ikamva le-bitcoin. Ngokucacileyo [luphawu] oluhle, kwaye [sonyusa amathuba okufikelela kuma-85%. ”
I-Balchunas iphinde yaqaphela ukuba omnye umqondiso wokuba i-ETF inokuvunywa kungekudala yile “UValkyrie uhlaziye nje ikamva labo le-ETF (eliqhele ukwenzeka kuphela xa amadada [kumqolo] elungele ukwaziswa). Bongeze i-ticker yabo ye-BTF, akukho mali ihlawulwayo. Andinakutsho ukuba oku kwenziwe ngobungqina bohlobo kodwa ngumqondiso olungileyo we-IMO. ”
Elinye ilungu loLuntu lwase-Cryptocurrency lihlala lithandabuza ngaphezulu kokuvunywa kwe-BTC ETF
Nangona kunjalo, abanye ababukeli balumkisile ukuba i-tweet yakutshanje ye-SEC isenokungabonisi imvume ye-BTC ETF ekhankanya i-tweet efanayo yiKhomishini ngoJuni.
Uqoqosho kunye nomhlalutyi we-crypto u-Alex Kruger ukhethe ukuba: "Intengiso itolika esi sithuba se-SEC njengengxaki ye-ETF ye-bitcoin inyuke ngokumangalisayo kodwa qaphela, i-SEC ibithumele into efanayo ngoJuni."
Nangona kunjalo, uluntu lwe-crypto lunethemba lokuba umlindi uya kuvuma i-BTC ye-ETFs esalindelwe kuthathelwa ingqalelo ukuba uSihlalo we-SEC uGary Gensler ubonakalise ukungafihli kwakhe kwingcinga yayo.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, ETF, iindaba, sec